Madaxweyne Siilaanyo oo khudbad Ka Jeediyey Kulanka Jaaliyadda Somaliland – WARSOOR
London – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo safar shaqo ku jooga Ingiriiska ayaaa habeenimadii xalay kulan balaadhan la qaatay jaaliyadda reer Somaliland ee dalka UK. Madaxweynaha ayaa kulankaasi ka jeediyey qubad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay.
Halkan ka akhriso Khubadda madaxweynaha oo naga soo gaadahy wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA:
Sharaf weyn bay ii tahay in aan ka soo qayb galo, munaasabaddan ballaadhan, ee ay isugu yimaadeen magaynadii iyo mudankii Jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan carrigan Inigiriiska. Mar labaadka, waxaan jecelahay in aan halkan ugu mahad-celiyo, haldoorkii, hawsha weyn ka galay qaban qaabada kulankan qiimaha badan.
Talo wadaagga, tudhaalaha, tanaasulka iyo taariikh jacaylka, waxaan u aqaan tilmaamaha, iyo tabaha lagu toydo hoggaamiyaha toosan. Haddii ragga qaar nugayl iyo nacasnimo u haysto, samirka iyo dul qaadka waxaan u aqaan sahayda siyaasiga suuban.
Bixinta deymankii cuslaa, ee aan kala wareegnay Xukuumaddii hore, kuwaas oo gaadhayay lacag u dhiganta $22 Milyan oo Dollar.
Adkaynta midnimada iyo wada jirka ummadda.
Adkaynta nabadgelyada iyo amniga Qaranka.
Dhismaha Ciidammda Qaranka.
Dardargelinta siyaasadda dibadda, xoojinta xidhiidhka wada shaqaynta dalalka aynu saaxiibka nahay, iyo waddamada deriska.
Dhiirigelinta wax soo saarka, xoolaha nool, ganacsiga iyo ilaalinta deegaanka.
Kordhinta dakhliga dawladda iyo koboca dhaqaalaha dalka.
La dagaalanka musuq maasuqa iyo maamul xumida.
Kor u qaaddida adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale (Waddooyinka, madaarrada, dekedaha, waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo iwm).
Dhiirigelinta maalgashiga shisheeye, si loo abuuro shaqooyin iyo dano ganacsi oosabab u noqon kara saxiibo siyaasadeed.
Abuurista Sanduuqa Horumarinta Somaliland (Somaliland Development Trust Fund).
Diyaarinta Qorshe Qaran (National Plan), kaas oo koobaya baahiyaha horumarka gobollada dalka, si loogu qaybiyo mashaariicda iyo maalgalinta qaab xaq soor leh.
Ilaalinta xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadiniinta.
Ilaalinta shuruucda iyo dastuurka dalka.
Dib u habaynta iyo daryeelka cadaaladda, si waafaqsan madax bannanida garsoorka.
Tayeynta iyo daryeelka ciidammada iyo shaqaalaha dawaladda.
Ka midho-dhalinta wada hadallo dhex mara Somaliland iyo Somalia.
Nabadaynta iyo maamul ku fidinta Gobollada Bari ee dalka.
Joojinta lacagihii giinbaarka ahaa iyo isticmaalka Shilinka Somaliland Dalka oo dhan.
Halka aannu kula wareegnay Miisaaniyaddii 2010 ee waxbarashada, Afar iyo Toban Bilyan Lix Boqol iyo Siddeed iyo Soddon Milyan oo Somaliland Shillings ah. Taas oo u dhiganta Laba Milyan Afar Boqol iyo Siddeed iyo Soddon Kun oo Dollar. Faraqa korodhka miisaaniyaddu waa %499.
Caasmiadda Dalka oo ay ku nool yihiin, dad aad u tiro badan oo lagu qiyaaso, hal milyan iyo laba boqol oo ku oo qof, waxaa ka jirta biyo yari xoog leh. Xukuumadda Xisbiga Kulmiye, iyadoo ka duulaysa baahidaa weyn, waxaa si culus loogu hawlgalay, in magaalo madaxda dalka loo helo biyo ku filan oo haqab tirikara. Maanta Caasimadda waxa soo gaadha 9 Kun oo meter cubic 24-kii sacaadoodba,waxaana loogu talo-galay inay waraabiyaan 180 kun oo qof, qorshahaa waxa la sameeyey 35 sanno ka hor. Mashruuca Koobaad oo ah Biyo soo-saar: waddamada EU-du waxay inoogu deeqeen 15 milyan oo Euro, sanduuqa SDF-ta waxa laga bixiyey 10.5 Milyan oo Dollar. Waxa loo qorsheeyey mashruucan inuu soo saaro 33 Kun oo Meter Cubic oo biyo ah. Waxa loogu-talo galay inay waraabiyaan hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof.
Dhinaca kale, waxaan ahay ruug caddaa ay u kala soocan tahay, xilka guud ee aan Qaranka u hayo, iyo taageerada aan Xisbigayga siinayo. Sidaa darteed, waxaan u caddaynaya murashaxiinta kale, in aan haybadda iyo hantida uu Qaranku wada leeyahay, marna loo adeegsan doonin ololaha doorashooyinka Xisbiga Kulmiye.Mar labaad, waxaan u caddaynaya in dalka ay ka dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah, taas oo cid waliba ay calafkeeda qaadi doonto, si cadaalad leh.
Dawladda Somaliland waxay soo dhawaynaysaa, dedaalka ay ugu jirto beesha caalamku, sidii nabad loogu soo dabbaali lahaa Dalka Somalia, isla markaana loogu dhisi lahaa Dawlad adag oo hanata xilka iyo masuuliyadda saaran. Waxaanu dunida u caddaynaynaa, in Somaliland tahay dal madax bannaan, oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay Nidaamka Federaalka Dawladda Somalia, ee looga taliyo magaalada Muqdisho.
Waxaanu u caddaynaynaa Beesha Caalamka, in aanay metelin Jamhuuriyadda Somaliland, shaqsiyaad Muqdisho laga cugtay, oo magacayaga loo adeegsado. Tallaabadani waa mid caqabad ku keeni karta, ambaqaadka wada hadallada labada dal. Sidoo kale, waa mid u horseedi karta mandaqadda Geeska Africa colaad iyo xasillooni darro.
Waxaan ugu baaqayaa bulshada caalamka, inay garwaaqsadaan, isla markaana ixtiraamaanrabitaanka Shacbiga Somaliland iyo xaqa sharci ee ay u leeyihiin inay noqdaan qaran madax-bannaan. Waxaan si weyn uga digayaa, cawaaqib xumada ka dhalan karta, in la duudsiyo xaqa aaya ka tashiga dadkayga iyo dalkayga. Qarannimada iyo Madax-bannaanida Somaliland waxay dan u tahay nabad-galyada, deganaanshaha, geedi-socodka dimuqraadiyada, ganacsiga iyo horumarka Geeska Africa iyo ka caalamka intaba.
In ay adkeeyaan midnimada iyo wada jirka dhexdooda, isla markaana la isugu dul-qaato kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadeed ee jira.